Mareykanka oo mallaayiin dollar dul dhigay madaxa xubin sare oo ka tirsan Al-Shabaab – Hornafrik Media Network
Mareykanka oo mallaayiin dollar dul dhigay madaxa xubin sare oo ka tirsan Al-Shabaab
Hey’adda FBI,da dalka Maraykanka ayaa lacag dhan 5 million dul dhigtay madaxa hoggaamiye la yiraahdo Jaahid Sarwaan Mustafa oo ka tirsana hogaanka ururka Al-Shabab ee Soomaaliya ka aas aasan.
Madaxda FBI.da Maraykanka waxay sheegay inay doonayaan in laga keeno xogo dhamaystiran halka uu Soomaaliya ka joogo waxaana ay ku eedeeyeen inuu mas’uul ka ahaa weeraro dad badan oo rayid ah lagu dilay oo ka dhacay Soomaaliya.
Warkaan Maraykanka kasoo baxay waxaa lagu sheegay in Jaahid Mustafa uu abaanulay boqolaal weerar oo qaraxyo iyo shirqoolo ahaa oo ka dhacay gudaha Soomaaliya iyo xataa Afrika.
Dhawaan ayuu soo saaray muuqaal koobnaa oo uu wajiga u xiran yahay waxaana uu soo jeediyay in la weeraro shaqsiyaadka Maraykanka ee gobolka ku sugan.
Sargaal ka tirsan FBI.da Maraykanka oo la yiraahdo Scott Brunner ayaa sheegay inay aaminsanyihiin in hogaamiyahaan uu halis ku yahay danaha Maraykanka.
“Cid kasta oo keenta xogta Jihaad Sarwaan Mustafa halka uu Soomaaliya ka joogo waxaan siinaynaa 5 million oo Dollar sababtoo ah waa halis joogto ah” ayuu yiri Scott Brunner, oo u hadlay Maraykanka.
FBI,du waxay rumaysan tahay in hogaamiyahaan oo ku dhashay Santiyeego Maraykanka uu madax ka yahay qeybta qaraxyada Al-Shabab waxaana uu sabab u ahaa qaraxyo lagu baa’abay oo dalka iyo dibbadiisaba ka dhacay dhawrkii sanno ee lasoo dhaafay.
Hogaamiyahaan waxaa la aminsanyahay inuu Soomaaliya yimid sanadkii 2004 kadibna waxaa uu ka qeyb qaatay dhowr dagaal oo Soomaaliya ka dhacayna kadibna waxaa uu ka mid noqday hogaanka qeybta qaraxyada u diyaarisa Al-Shabab.
R/Wasaarihii hore ee Malaysia oo qirtay inuu lunsaday malaayiin Dollar